Volaris dia nanampy fiaramanidina A320 NEO valo hafa ho an'ny fiaramanidina ao amin'ny 2021
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Mexico » Volaris dia nanampy fiaramanidina A320 NEO valo hafa ho an'ny fiaramanidina ao amin'ny 2021
Ny fahafaha-manao fanampiny dia haparitaka indrindra hanamafisana ny toeran'ny kaompaniam-pitaterana an-tsena any Mexico
Volaris dia afaka nanararaotra ny toe-draharaha tsara indrindra amin'ny fampanofana
Volaris dia manombatombana fotoana mety hanamoriana tsena hanampy fiaramanidina fanampiny
Ny fiaramanidina mahomby amin'ny solika dia hahafahan'i Volaris manararaotra ny fotoana mety amin'ny tsena amin'ny tapany faharoa amin'ny taona
Controladora Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV, ilay kaompaniam-pitaterana lafo vidy izay manompo any Mexico, Etazonia ary Amerika afovoany, ankehitriny dia manambara ny fanampiana valo hafa Airbus Fiaramanidina A320 NEO mankany amin'ny fiaramanidiny amin'ny 2021, ambonin'ireo fiaramanidina telo avy amin'ny kaomandy nividianany an'i Airbus, nanidy ny taona tamina fiaramanidina 98 farafaharatsiny.
Volaris dia afaka nanararaotra ny toe-javatra tsara indrindra amin'ny tsena fampanofana izay ahafahana manampy ireo fiaramanidina ireo amin'ny fiaramanidina, izany rehetra izany dia amin'ny fampanofana maharitra. Ny mpifaninana aminay dia nidina ambany ary naneho fotoana iray tsy nisy toa izany ho an'i Volaris hanampiana fahasalamana fanampiny.
Rehefa mahazo vahana eo amin'ny tsenantsika ny vaksinina, ny fitokisana amin'ny fitsangantsanganana an'habakabaka dia nitombo arak'izany ary noho izany dia hampiditra fiaramanidina A320 NEO fanampiny ho an'ny fiaramanidina i Volaris amin'ny 2021 amin'ny alàlan'ny fampanofana mivantana, ny dimy amin'izany dia hanomboka amin'ity seranana ity. Ity fahafaha-manao fanampiny ity dia haparitaka indrindra hanamafisana ny toerana misy antsika eo amin'ny tsena anatiny Mexico. Ny orinasa dia manombatombana amin'ny fotoana mety ahafahan'ny tsena manampy fiaramanidina fanampiny.
Ireo fiaramanidina mahomby solika ireo dia hahafahan'i Volaris manararaotra ny fotoana mety amin'ny tsena amin'ny tapany faharoa amin'ny taona ary hampitombo ny isan-jaton'ny fiaramanidina fianakaviana A320 NEO ao anaty fiaramanidina. Ireo rehetra ireo dia nifanaraka tamin'ny paikadin'ny faharetan'ny orinasa hiantohana ny fivelaran'ny indostria sy ny orinasa amin'ny ho avy.